I-Citroen ne-Peugeot efanelekayo
Ifanele i-Fiat ne-Iveco
Ifanele uMassey Ferguson Perkins
Ifanele iMercedes Benz
Ifanele i-RVI Saviem
Ifanele i-Yanmar ne-Kubota
Imithetho yabantu bakwamanye amazwe abangena eChina ngemuva kweCovid-19
Ngokwesimemezelo saseChina ngoMashi 26, 2020: Kusukela ngo-0:00 ngoMashi 28, 2020, abokufika bazomiswa okwesikhashana ukungena eChina nama-visa asemthethweni nezimvume zokuhlala. Ukungena kwabantu bangaphandle namakhadi okuhamba ngebhizinisi e-APEC kumisiwe. Izinqubomgomo ezifana ne-port v...
I-Forward130th Canton Fair izobanjwa kokubili ku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi
NgoJulayi 21, iwebhusayithi esemthethweni yoMnyango Wezohwebo wePeople's Republic of China yamemezela ukuthi umbukiso we-130 we-China Import and Export Fair (Canton Fair) uzoba ku-inthanethi futhi ungaxhunyiwe ku-inthanethi kusukela ngo-Okthoba 15 kuya kuNovemba 3, kanye nesikhathi esiphelele sombukiso. izinsuku ezingu-20. Ukuthengwa kwe-China kwe-130...
Isaziso sokubamba iqhaza ku-130th Canton Fair
Inkampani yethu izoqhubeka nokuhambela i-130th Canton Fair kusukela ngo-Okthoba 15 kuya ku-19, 2021
Intengo yethusi ikhuphukela kurekhodi eliphezulu , inweba ukwenyuka kwezinzuzo onyakeni odlule
Irekhodi lokugcina le-copper laqoshwa ngo-2011, ngesikhathi esiphezulu somjikelezo wezimpahla, lapho i-China iba isizinda esinamandla kwezomnotho ngemuva kokutholakala kwayo okuningi kwezinto ezingavuthiwe. Kulokhu, abatshalizimali babheja ukuthi indima enkulu yethusi ekuguquleleni umhlaba wonke kumandla aluhlaza izodala ukwanda kwe ...
Izizathu zokuthwala injini zivala shaft
“Injini ethwele ikhiya umgodi” ukwehluleka okukhulu kwenjini, ngokuvamile ibhekisela ekungqubuzaneni okomile okukhulu phakathi kwe-crankshaft kanye ne-main bear/con rod ephethe ukuzungezisa injini ngenxa yokulahlekelwa uwoyela, futhi kwakha izinga lokushisa eliphezulu phezulu, ijenali ye-shaft kanye nenjini. bearings mutua...
Imigomo yokusebenzisa kanye Nenqubomgomo Yemfihlo
Ukuzalanisa Okuyinhloko Enjini Yasolwandle, I-Top End Bearing kanye ne-Bottom End Bearing, I-Trust In Connecting Rod, I-Thrust Bearing Enjinini, I-B58 Rod Bearings, I-Conrod Bearing,
Ikheli: No.258 Houzhang Rd, Xiaolan Industrial Garden, Nanchang City, Jiangxi Province, China
Imithetho yabakwamanye amazwe abangena eChina ngemuva...
Ngokwesimemezelo saseChina ngoMarc...
I-Forward130th Canton Fair izobanjwa yomibili ...
NgoJulayi 21, iwebhusayithi esemthethweni ye-M...
Isaziso sokubamba iqhaza ku-130th Cant...
Inkampani yethu izoqhubeka nokuhambela i-1...